9 lahy voasambotry ny polisy : efa nigadra teny Tsiafahy, niverina nanao asan-jiolahy indray (NewsMada) | AEMW
9 lahy voasambotry ny polisy : efa nigadra teny Tsiafahy, niverina nanao asan-jiolahy indray (NewsMada)
Tsy mety fay! Vokatry ny fiaraha-miasan’ny polisin’ny UIR sy ny kaomisaria manodidina eto an-drenivohitra no nahasamborana ireto jiolahy raindahiny ireto, afakomaly teny Behoririka sy Antanimena. Efa samy nigadra teny amin’ny fonjan’Antanimora sy Tsiafahy ny ankamaroan’izy ireo…
Jiolahy raindahiny amin’ny fanaovana sinto-mahery, fanendahana, halatra, fanafihana mitam-piadiana ireto saron’ny polisy ireto. Voalaza fa nandritra ny fisafoana sy ny angom-baovao teo am-pelatanan’ny polisy no nahafahan’izy ireo nitsongo dia ireto olon-dratsy ireto. Tratra tany amin’izy ireo koa ny vovo-tsakay izay afendraka eny amin’ny tarehin’ny olona endahina, antsikely fanatatahana ny poketram-behivavy, big boss, matraque, fanalahidy maro anaka fangalarana môtô. “Misy amin’izy ireo no efa nigadra eny amin’ny fonjan’Antanimora sy Tsiafahy, saingy niverina nanohy asa ratsiny indray taorian’ny fivoahana ny fonja. Mbola tratra tany amin’iray amin’izy ireo ny poketram-behivavy iray ka efa naverina amin’ny tompony”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny Commissariat Central ao Tsaralalana, ny Commissaire principal de police, Tsaramonina Ravony.
Maro ireo jiolahy efa naiditra am-ponja
Nohamafisin’ity manamboninahitra ambony ity hatrany fa miisa 12 ireo jiolahy voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany faharoa eny Ambohijatovo Ambony naiditra am-ponja vonjimaika raha miisa 15 kosa ireo tratran’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany Analakely, izay naiditra am-ponja ihany koa. Miisa 14 kosa ireo jiolahy saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito eny 67 ha.
Manentana hatrany ny polisy amin’ny fanomezana loharanom-baovao marim-pototra sy ao anatin’ny fotoana haingana eo amin’ny olona tsara sitrapo mba hahafahana misoroka dieny mialoha ny fanafihana mety hitranga tampoka.
@dmin August 18, 2016 NewsMada No Comments
← Kidnnaping : Maorisianina iray nanjavona (NewsMada)
Tsy fanarahan-dalàna… : polisy 15 efa naiditra… “violon” (NewsMada) →